म एमाले हो, बरु सांसद् पद छाड्छु– भगवती न्यौपाने – Sudurpaschim Online
म एमाले हो, बरु सांसद् पद छाड्छु– भगवती न्यौपाने
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा एमाले र माओवादीका सांसद् छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा भने अवस्था फरक छ । राष्ट्रिय सभामा एमाले र माओवादी बाहेक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का समेत सांसद् छन् ।
गत चुनावमा वाम गठवन्धन बनाए पनि एमाले र माओवादीले बेग्लाबेग्लै पार्टीका रुपमा चुनाव लडेका थिए । अदालतको फैसलासँगै दुई पार्टी फरक भएका छन् । दुई पार्टी एकीकरण भएपछि अर्थात् नेकपा बनेपछि पनि चुनाव भयो । पोखरामा उपचुनाव भएर विद्या भट्टराई निर्वाचित हुनुभयो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा १८ जना सदस्यको निर्वाचन भयो । राष्ट्रिय सभाको १८ सदस्य र प्रतिनिधि सभाका एक सदस्य एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैका होइनन् । उनीहरु नेकपाका हुन् । नेकपा पार्टीको अस्तित्व समाप्त भइसक्यो । नेकपा नाम भने ऋषि कट्टेलको नेतृत्वको पार्टीले पाएको छ ।
अब राष्ट्रिय सभाका १८ र प्रतिनिधि सभाका एक सदस्य कुन पार्टीको हुने ? एमाले कि माओवादी केन्द्रको ? यो जटिलता सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा हुँदा निर्वाचित हुनुभएकी भगवती न्यौपाने सनराइज खबरसँग भन्नुहुन्छ– ‘हो, म कुन पार्टीको सदस्य भन्ने वैधानिक प्रश्न उठ्ने नै भयो । म जस्तै अन्य साथीहरु पनि कुन पार्टीको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’
नेकपा बनिसकेपछि भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका उपचुनावमा विजयी भएकाहरु पनि कुन पार्टीका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
भगवती भन्नुहुन्छ– ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई सबैले निशर्त स्वीकार गर्नुपर्छ । नेकपा निर्माण भइसकेपछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाहरु सम्बन्धमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा विवेकसम्मत निर्णय गरिनुपर्छ ।’
भगवतीले आफू केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीको पक्षमा रहेको बताउँदै एमाले पुर्नस्थापना भएपछि आफू एमाले बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘म एमाले हो । सांसद् पद त्याग्नुपर्छ भने त्याग्छु तर म एमाले नै हो ।’
नेकपाबाट निर्वाचितहरुलाई पार्टी चयनको अवसर कानुनी रुपमै दिइनु उचित हुने भगवतीले बताउनुभयो ।